Tobin-tsolika Alarobia : Hafindra eny Ambohijanaka Kaominina ambanivohitra Bongatsara
vendredi, 08 octobre 2021 11:05
Tamin’ny 26 Jolay 2017 no nivoaka ny didim-panjakana mamaritra ny fifanarahana famindran-toerana ny tobin-tsolika etsy Alarobia ho amina velaran-tany 18ha eny Ambohijanaka.
Tetikasa antsoina hoe « Tanisoa » atao hitahiry ny filàna ara-tsoliky ny eto an-drenivohitra izy ity, ary efa andalam-pamaranana ny dingana voalohany dia ny fanarenan-tany amin’izao. Aorian'izay ny fananganana ity tobin-tsolika vaovao manaraka ny teknolojia farany ity.
Tena zava-dehibe ity fotodrafitrasa ity hoy ny Minisitry ny Angovo sy Akoranafo, Ramaroson Andry Heriniaina satria dia tena tsy azo atao mihitsy ny mametraka fampitaovana toy itony antampon-tanàn-dehibe fa loza ho an’ny mponina raha sanatria misy fipoahana, ary efa tsy mahasahana ny filàna ara-tsolika eto Antananarivo intsony ihany koa io tobin-tsolika misy ankehitriny io.
Vinavinaina ho avo telo heny amin’ny habehany ankehitriny, ary hanomboka hiasa any amin’ny taona 2024 any moa izao fotodrafitrasa izao hoy ihany izy nandritra ny lahateniny.
Momba ireo mponina vitsivitsy nipetraka manodidina ity toerana ity ihany koa dia efa voaloa avokoa ny vola tokony omen’ny Fanjakana azy ireo nialohan’ny nanombohana ny asa, hoy ny Minisitry ny fanajarina ny tany sy ny Fananan-tany, Andrianainarivelo Hajo.
Mijanona ho fananan’ny Fanjakana, tsy azo amidy ny ampahany amin’ireo tany hisy ity fotodrafitrasa ity, eny fa na dia orinasa tsy miankina aza ny LPSA, tompon’izany.